सानियाको विनालाई जवाफ- म पाकिस्तानी टोलीको आमा होइन :: Setopati
सानियाको विनालाई जवाफ- म पाकिस्तानी टोलीको आमा होइन
एजेन्सी लन्डन, असार २
भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा तथा पाकिस्तानी अभिनेत्री विना मलिकबीच ट्वीटरमा चर्को भनाभन भएको छ।
सानियाले विना मलिकलाई ट्वीटरमा जवाफ दिँदै आफ्नो बच्चाको ख्याल कसरी राख्ने विषयमा चिन्ता नलिन आग्रह गरेकी छिन्।
उनले लेखिकी छिन्, ‘मेरो बच्चाको ख्याल कसरी राख्छु भन्ने कुरा तपाईं र दुनियाँको चिन्ताको विषय होइन।’
विना मलिकले सानियालाई जंक फुड पाउने रेस्टुरेन्टमा बच्चालाई लागेको भन्दै आलोचना गरेकी थिइन्। विनाले ट्वीटमा घर बाहिर डिनर खाँदा खेलाडीको फिटनेसमा खराब असर गर्ने भनेर लेखेकी थिइन्।
‘सानिया म तिम्रो बच्चाको विषयमा चिन्तित छु। तपाईहरु बच्चाको साथमा शीशा प्यालेसमा हुनु खतराजनक होइन? मलाई थाहा भएसम्म यहाँ जंक फुड पाइन्छ। जुन खेलाडी र बच्चाका लागि ठिक होइन। तपाई एक आमा र खेलाडी भएको कुरा तपाईलाई थाहा छैन?,’ विनाले लेखेकी छिन्।
विनाको ट्वीटपछि सानियाले आक्रामक जवाफ फर्काएकी थिइन्।
उनले लेखिकी छिन्, ‘विना मैले मेरो बच्चालाई शीशा प्यालेस लगेको छैन। यो विषयमा तपाई र बाँकी दुनियाले चिन्ता लिनु पर्दैन। म आफ्नो बच्चाको ख्याल कसैको भन्दा कम राख्दिन। दोस्रो कुरा म पाकिस्तानी क्रिकेट टिमको डाइटिशियन,आमा, प्रिन्सिपल र शिक्षक होइन। ’
आइसिसी क्रिकेट विश्वकप २०१९ अन्तर्गत भारतसँग पराजित भएको पाकिस्तानी टिम अघिल्लो दिनको राति इंग्ल्यान्डको एक रेस्टुरेन्टमा डिनरका लागि गएको बताइएको छ।
भारत अघिको खेलअघि डिनरका लागि गएको पाकिस्तानी टिमले फिटनेसको चिन्ता नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
यद्यपी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डले शनिबार राति नभइ शुक्रबार डिनरका लागि गएको बताएको छ। सो डिनरको भिडियो आफ्नो अनुमति बिना लिइएको र पोस्ट गरिएको भन्दै सानिया मिर्जा असन्तुष्ट छिन्।
ट्वीटरमा सानिया र विनाबीच रेस्टुरेस्टमा गएको विषयमा लामो भनाभन चलेको थियो। जस मध्ये एक ट्वीट सानियाले डिलिट गरेकी थिइन्। सानियाले डिलिट गरेको ट्वीट विनाले स्क्रीन सर्ट सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
जहाँ लेखिएको थियो,’हामीलाई कतिबेला सुत्नु पर्छ थाहा छ। के खाने भन्ने थाहा छ। सबैभन्दा चिन्ताको कुरा तपाईंले पत्रिकाको कभर पेजका लागि केहि गर्नु भएको छ त्यो बच्चाको लागि शालिन विषय होइन। तपाई थाहा छैन यो खतराजनक छ भनेर? हाम्रो चिन्ता गरेकोमा तपाईंलाई धन्यवाद।'
ट्वीटरको सवाल जवाफमा कतिपयले आफ्नो रायँ व्यक्त गरिरहेका छन्। पाकिस्तानमा त सानिया ट्रेन्डिङमा आएकी छिन्।